Ciyaartoy caan ah oo ganaax la yaab leh dusha loo saaray (Maxaa u sabab ah) – SBC
Ciyaartoy caan ah oo ganaax la yaab leh dusha loo saaray (Maxaa u sabab ah)
Posted by editor on April 22, 2011 Comments
Goolhayihii hore ee qaranka Germany & kooxda kubada cagta ee dalkaasi ka dhisan ee Bayern Munich ayaa maxkamad ku taal magaalada Munich waxay ku ridey xukun lacageed oo ganaax ah oo gaaraya 150 kun oo doolar.
Ganaaxa Kahn ayaa ka dambeeyey ka dib markii isagoo safar uga yimid magaalada Dubai ee wadanka Isu taga Imaaradka Carabta uu qarsadey dhar & alaabo kale oo uu soo gatey, isagoo ka qariyey laanta ilaalinta canshuuraha ee Germany ee garoonka diyaaradaha Munich isagoo lagu eedeeyey in uu iska indho tiray in uu soo maro castom-ka si uu u sheego (declare) alaabaha uu wato.
41 sano jirka qaranka Germany u saftey 86 koob ayaa ciyaaraha isaga fariistey sanadkii 2008-dii, waxaana la sheegay inay qabteen ciidamada ilaalinta canshuuraha garoonka diyaaradaha Munich, isagoo ka gudbay qaybta garoonka ee dadka aaay jirin alaab ay soo bandhigaan “Nothing to declare” .
“Waxaan lagu qabtey dhar qaali ah & galuusyada shaararka gacmaha loogu xirto oo ah kuwa qaaliga ah kuwaasi oo qiimo ahaan ku kacaya 9 kun oo doolar, waana sababta keentay in lagu ganaaxo lacagtaasi” sidaasi waxaa saxaafada u sheegay Christoph Fellner oo ah afhayeen u hadley maxkamada xukuntey Oliver Kahn.
Dacwad ku oogaha Mr Kahn ayaa ka codsadey maxkamada in ciyaartoygaasi hore lagu xukumo 500 kun oo oo doolar, laakiin maxkamadu waxay go’aamisey 150 kun oo doolar in lagu xukumo Olivar Kah.